स्न्यापड्रैगन 865। प्लस प्रदर्शन सुधारको साथ घोषणा गरीएको छ Androidsis
आरोन रिवास | | Meizu, हाम्रो बारेमा
केहि समस्याहरू विरुद्ध, क्वालकॉमको नयाँ प्रोसेसर, धेरै-अफवाहको स्नैपड्रागन 865 प्लस, अन्ततः सेमीकन्डक्टर निर्माताले केहि घण्टा पहिले जारी गर्यो। Meizu ती कम्पनीहरू मध्ये एक हो जुन विगतमा भनिएको थियो कि यस SoC यस बर्ष आउने छैन, तर हामी पहिले देखि नै देख्यौं कि बयान केवल अनुमान भन्दा बढि केही थिएन।
अपेक्षित रूपमा, यो पहिले देखि नै प्रस्ताव भन्दा एक उच्च प्रदर्शन छ Snapdragon 865जुन आफैंमा धेरै कम्प्यालिन्ट छ। त्यहाँ कुनै अनुप्रयोग वा खेल छैन जुन कुनै समस्या बिना चल्दैन। तथापि, यो नयाँ प्लस भेरियन्टको साथ हामी दैनिक आधारमा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्नेछौं।
1 स्नैपड्रैगन 865। प्लसको बारेमा सबै, एक शक्तिशाली SoC जसले सबै गर्न र अधिक गर्न सक्दछ
1.1 कुन फोनहरू यसलाई प्रयोग गर्न पहिलो हुन्?
स्नैपड्रैगन 865। प्लसको बारेमा सबै, एक शक्तिशाली SoC जसले सबै गर्न र अधिक गर्न सक्दछ
यो निराश हुनेवाला थियो, पछि प्लस संस्करण प्रस्ताव गरे पछि Snapdragon 855, क्वालकॉमले SDM865 को भिटामिनयुक्त मोडेल जारी गरेको थिएन। त्यस्तै प्रकारले हामी यस वर्षको यो सम्भावित अनुपस्थितिको बारेमा बिर्सन सक्दछौं, किनकि हामीसँग अहिले छ, र उच्च घडी फ्रिक्वेन्सीको साथ, तर n एनएम र अन्य विशिष्टताको नोड आकार कायम गर्दछ।
प्रश्नमा, हामी स्मार्टफोनका लागि पहिलो अष्ट-कोर चिपसेटको सामना गरिरहेका छौं जुन G.० गीगा हर्ज गतिको बाधा भन्दा बढी छ।, एक Kryo 3.1 कोर को धन्यवाद 585 GHz को एक विशिष्ट प्रदर्शन प्रस्ताव गर्न; क्वालकमका अनुसार यसले १०% को प्रदर्शन बृद्धि गर्दछ। बाँकी कोरहरू '+ + 10' योजना अन्तर्गत विभाजन गरिएको छ: 3x २.4 GHz + 3x मा १.2.42 GHz मा।
Adreno 650 GPU यस मोबाइल प्लेटफर्ममा रहन्छ, तर यसको १०% भन्दा बढि प्रदर्शन पनि छ, त्यसैले यो प्रोसेसरले राम्रो गेमि provide अनुभव प्रदान गर्दछ, केही कुरा जसले धेरै वाचा गर्छ। बदलेमा, G जी जडानको साथ X10 X मोडेम SDM55 + द्वारा सुरक्षित गरिएको छ।
यो SoC क्वालकॉम फास्ट कनेक्ट nect 6900०० टेक्नोलोजीसँग उपयुक्त छ, जसले प्रस्ताव गर्दछ 3.6 जीबी / हरू सम्मको गति। यसले Wi-Fi 6E, ब्लुटुथ .5.2.२, र १144 हर्ट्ज डिस्प्लेलाई पनि समर्थन गर्दछ, ट्रु १०-बिट HDR टेक्नोलोजी बाहेक।
कुन फोनहरू यसलाई प्रयोग गर्न पहिलो हुन्?
स्पष्ट रूपमा, पहिलो मोबाइलहरू जुन उनीहरूको हुडको मुनि स्न्यापड्रैगन 865ood+ लैजाने छ उच्च प्रत्याशित हुनेछ ROG फोन As Asus र लेनोवो सेना बाट। निस्सन्देह, यी दुई मेसिनहरूमा गेमि functions प्रकार्यहरू हुनेछन्, किनकि तिनीहरू खेल खेल्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन्। यसको मतलब यो हो कि उनीहरूसँग उन्नत कूलि systems प्रणाली र थप सुविधाहरू हुनेछन् जुन उनीहरूमा गेमि experience्ग अनुभवलाई पहिले नै थाहा भएका भन्दा राम्रो बनाउँदछ।
Asus ROG फोन 2
यस आउँदो जोडीको बारेमा धेरै ज्ञात छैन, तर केही अफवाहहरू उनीहरूको सम्भावित सुविधाहरू र टेक्निकल चश्माको बारेमा अघि बढेका छन् जसमध्ये यी मध्ये एउटाले सुझाव दिन्छ कि दुबै फुल एचडी + प्यानलहरूको वाहक हुनेछ १ 144 XNUMX हर्ट्जको उच्च ताजा दरको साथ, जुन प्रति सेकेन्ड १144 छविहरू सम्म प्लेब्याक दर बराबर छ, वा fps (फ्रेम प्रति सेकेन्ड)। यससँग, खेलहरूमा तरलताको तुलनामा पाउनुहुनेछ जुन रातो जादुई 5G, नुबिया प्ले G जी र आईक्यूओ नियो y Z1, फोनहरू जुन भित्र स्नापड्रैगन 865। छ।
हामीले कुरा गरिरहेको कूलि system प्रणाली यी मोबाइलहरूमा उन्नत हुनेछ, आशा गरेजस्तै स्नैपड्रैगन 865 Plus प्लसलाई राम्रो उचाइ समर्थन प्रदान गर्न, यद्यपि वास्तवमा यसलाई राम्रोसँग चलाउन आवश्यक पर्दैन, तर लामो घण्टा पछि ओभरहिटबाट बच्न प्रयोगको मांग गर्दै। यो सम्भव छ कि हामी दुबै केसमा संकर प्राप्त गर्दैछौं। हामी उनीहरूलाई रेड मैजिक5जी को जस्तो फ्यान सुसज्जित हुने आशा गर्दैनौं, त्यसैले हामी सम्भवतः यो मोडेल अन्य मोडेलमा प्राप्त गर्नेछौं।
सम्भवतः, यी स्मार्टफोन मध्ये कम्तिमा एक १ one जीबी र २16 जीबीको र्याम र भण्डारण ठाउँको संस्करणको साथ आउँनेछ। र्याम टेक्नोलोजी LPDDR256 हुनेछ, जबकि ROM को युएफएस 5.१ हुनेछ, चिपसेटको साथ प्रदर्शन वृद्धि गर्न क्रममा। यो संयोजनले विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मोबाइल द्वारा हाल दर्ता गरिएको thousand०० हजार पोइन्ट भन्दा बढीको आंकडा सुनिश्चित गर्दछ। AnTuTu रैंकिंगजुन आज हो ओप्पो X2 प्रो खोज्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » स्नैपड्रैगन 865। प्लस आगामी फ्ल्यागशिपहरूका लागि प्रदर्शन सुधारको साथ घोषणा गरिएको छ